महामारीको मुखमा पुगेको जापानले कोरोनाविरुद्ध कसरी पायो सफलता ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/महामारीको मुखमा पुगेको जापानले कोरोनाविरुद्ध कसरी पायो सफलता ?
एक महिनाअघिसम्म स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले जापान कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ बन्नसक्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिएका थिए ।
जापानको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । संक्रमण फैलिँदो क्रममा थियो । अस्पतालहरूमा बिरामीको संख्या बढ्दो थियो । तर, परीक्षण निकै कम भइरहेको थियो ।अझ भन्नुपर्दा जापान आफ्नो कोरोना भाइरस नियन्त्रणको योजनामा विफल हुँदै गइरहेको थियो । सुरुवातमा राम्रो कदम चालेको जापानले बीचमा बाटो बिराएको भन्दै विशेषज्ञहरूले त्यहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने आशंका गरेका थिए ।
तर, अहिले जापान कोरोना नियन्त्रणमा दक्षिण कोरिया, हङकङ र ताइवानजस्तै सफल मुलुक बन्ने दिशामा छ ।विश्वमै सबैभन्दा धेरै जेष्ठ नागरिक भएको मुलुकमध्ये एक जापानको जनसंख्या १२ करोड ६० लाख छ । यो मुलुकमा अहिलेसम्म १६ हजार चार सय ३३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरूमध्ये ७८४ मानिसले ज्यान गुमाएका छन् ।
एनएचके टेलिभिजनका अनुसार शुक्रबार पछिल्लो २४ घण्टामा टोकियोमा तीन नयाँ संक्रमित भेटिए ।७ अप्रिलसम्म जापानमा नयाँ संक्रमितको संख्यामा यसरी कमी आउँछ भन्ने पत्याउन मुस्किल थियो । किनकि त्यतिबेला नयाँ संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्न सुरु गरेको थियो । त्यही दिन जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले टोकियो र अन्य प्रभावित केही राज्यमा आपतकाल घोषणा गरे । यो बिस्तारै सबै ४७ राज्यमा लागू भयो । यद्यपि लकडाउन विश्वका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा खुकुलो थियो ।
कोइकेका अनुसार जापानले निगरानी राख्न नसक्ने जापानका मानिसको व्यवहार र स्वाभावमा आएको उल्लेख्य परिवर्तनको कारण जापानमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा कमी आएको हो ।जापानको कोरोना भाइरस नियन्त्रणको एकमात्र कारण मानिसहरूले आफ्नै बानीमा ल्याएको परिवर्तनलाई बताउने मानिस पनि छन् ।
केही राज्यमा आपतकालीन अवस्था हटाउन छलफल भइरहेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा जापानमा कोरोना भाइरसका बिरामीको संख्या पुनः थप हुनसक्ने केही विश्लेषकहरूले बताएका छन् । केहीले भने संक्रमितको संख्या अहिले देखिएकोभन्दा १० गुणा बढी हुनसक्ने र आपतकाल हटाउँदा भाइरस फैलिने जोखिम कायम रहने बताएका छन् ।स्रोत : द गार्जियन